बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले १० अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु. १० अर्ब १५ करोड ८६ लाख लगानी गर्ने भएको छ ।
बैंकले यही मङ्सिर २३ गते अपराह्न ३ बजेसम्म वित्त व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिन आज एक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई रु. आठ अर्ब १२ करोड ६९ लाख, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय बैंकलाई रु. एक अर्ब ५२ करोड ३८ लाख र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्तमा रु. ५० करोड लगानी गर्ने जनाएको छ ।